कसरी तपाइँको जीमेल खाता पासवर्ड परिवर्तन गर्ने ग्याजेट समाचार
जीमेल पासवर्ड ठूलो महत्वको छ। अन्य व्यक्तिहरूलाई हाम्रो सन्देशहरू पहुँच गर्नबाट रोक्नको साथै यो मार्फत हाम्रो Google खातामा पहुँच गर्नबाट रोक्दछ। तसर्थ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीसँग हाम्रो खातामा एक सुरक्षित पासवर्ड हुनु आवश्यक छ, ताकि अर्को व्यक्तिको लागि पहुँच गर्न सक्षम हुन मुश्किल छ।
कडा पासवर्डहरू बनाउन जटिल छैन, तर यो महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले यो गर्यौं। धेरै अवसरहरूमा हामी सामान्य रूपमा एकै समयमा धेरै पृष्ठहरूमा उही पासवर्डहरू प्रयोग गर्दछौं, त्यस्तो कुरा जसले हामीलाई कमजोर बनाउँदछ। त्यसोभए तपाईको जीमेल पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् यो विचार गर्न एक राम्रो विकल्प हो। यहाँ हामी तपाईलाई कसरी देखाउन सक्छौं भन्ने देखाउँदछौं। ताकि तपाईं सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको ईमेल खाता.
त्यहाँ धेरै परिस्थितिहरू छन् जुन हामी जीमेलमा पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्छौं। यो त्यस्तो चीज हुन सक्छ जुन तपाईंले निर्णय गर्नुभएको छ, किनकि तपाईं आफ्नो खाताको सुरक्षा बढाउन चाहानुहुन्छ। तर यो पनि हुन सक्छ कि तपाईंले आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो, त्यसैले पुनःप्राप्ति प्रक्रियामा तपाईले नयाँलाई विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। हामी तल दुई परिस्थितिहरूको वर्णन गर्दछौं। साथै हामी कडा पासवर्डहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं।
1 जीमेल पासवर्ड क्रमशः परिवर्तन गर्नुहोस्
2 यदि तपाईंले आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो भने - पासवर्ड रिकभर गर्नुहोस्
3 कसरी बलियो पासवर्डहरू उत्पन्न गर्ने
जीमेल पासवर्ड क्रमशः परिवर्तन गर्नुहोस्
पहिलो विधि सबैभन्दा सामान्य हो, यदि तपाईंलाई चाहिएको समय आयो भने सुरक्षा सुधार गर्न पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् तपाईंको जीमेल खातामा। यस अवस्थामा पछ्याउने कदमहरू धेरै जटिल छैनन्। सबै भन्दा पहिले, तपाईले आशा गर्न सक्नुहुने जस्तो, तपाईले हाम्रो खातामा लग इन गर्नुपर्नेछ। यसैले हामी तपाईंको सुरक्षा सुधार गर्नेछौं, कुन एप्सको पहुँच छ भनेर पनि जान्नु महत्वपूर्ण छ।
एकचोटि हामी भित्र छौं, हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ cogwheel बटन स्क्रीनको माथि दायाँ तिर। सबै सन्देशहरूको शीर्षमा हामीसँग हाम्रो इनबक्समा छ। बटनमा क्लिक गरेर, विकल्पहरूको श्रृंखला देखा पर्नेछ। तपाईले देख्नु भएको छ कि ती मध्ये एउटा कन्फिगरेसन हो, जसमा हामीले क्लिक गर्नुपर्नेछ।
जीमेल खाता सेटिंग्स तब स्क्रिनमा खोल्नुहोस्। यस अवस्थामा, हामीले माथि खण्डहरू हेर्नुपर्नेछ। तिनीहरू सामान्य, लेबल, प्राप्त, आदि जस्ता वर्गहरु बाहिर आउँछ। यी खण्डहरू जुन हामी फेला पार्दछौं, त्यो एउटा हो जुन हामीलाई चासो दिन्छ यस अवस्थामा यो खाताहरू र आयात हो.
हामी त्यसपछि यो सेक्सन प्रविष्ट गर्छौं र हामी पहिलो भाग देख्नेछौं जुन स्क्रिनमा देखा पर्नेछ, खाता परिवर्तन गर्नुहोस् सेटिंग्स भनिन्छ। त्यहाँ, हामीलाई देखाइएको पहिलो विकल्प भनेको त्यो हो जीमेल पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्, निलो अक्षरहरूमा। हामी यो विकल्पमा क्लिक गर्दछौं, भने पासवर्डलाई परिमार्जन गर्नका लागि। तपाईलाई पहिले नै मेल प्लेटफर्ममा तपाईंको हालको पासवर्डको साथ लगइन गर्न सोधिनेछ।
तपाईं त्यसपछि स्क्रिनमा लगिन्छ जहाँ तपाईं केवल गर्नु पर्दछ जिमेलका लागि तपाईंको नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। यसलाई सुरक्षित मान्नु पर्ने आवश्यकताहरू देखाइन्छ। योसँग कम्तिमा आठ अक्षर हुनुपर्दछ। एक पटक हामीसँग पासवर्ड भएपछि, हामी यसलाई फेरि स्क्रिनको फेदमा दोहोर्याउँदछौं र पासवर्ड परिवर्तन गर्नका लागि हामी पर्दाको तल निलो बटन क्लिक गर्दछौं।
यी चरणहरूका साथ, तपाईंले पहिल्यै आफ्नो जीमेल पासवर्ड परिवर्तन गर्नुभयो। यो केहि पूर्ण छैन, र यसलाई प्राय जसो गर्नु राम्रो हुन्छ, यदि तपाईंलाई सुरक्षाको बारेमा शंका छ वा तपाईंलाई लाग्छ कि पासवर्ड यत्तिको बलियो छैन। प्रक्रिया आफैंमा गर्न को लागी जटिल छैन।
यदि तपाईंले आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो भने - पासवर्ड रिकभर गर्नुहोस्
एउटा अवसर जुन अवसरमा हुन सक्छ त्यो हो तपाईले आफ्नो जीमेल खाताको पासवर्ड बिर्सनुभयो। भाग्यवस, मेल सेवाको प्रक्रिया छ जसमा हामी पहुँच पुन: प्राप्त गर्न सक्दछौं र यसरी हामी पासवर्ड सजिलैसँग परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछौं। लगइन स्क्रिनमा, जब हामी पासवर्ड जान्दैनौं, हामी टेक्स्टमा हेर्छौं जुन पासवर्ड बाकस मुनि देखा पर्दछ।
यो एक छ पाठले "तपाईंको पासवर्ड बिर्सनुभयो?"। हामीले यसमा क्लिक गर्नुपर्नेछ, जसले हामीलाई पुन: प्राप्ति प्रक्रिया सुरू गर्न स्क्रिनमा लैजान्छ, ताकि हामीसँग फेरि खातामा पहुँच छ। पहिलो कुरा यसले तपाईलाई सोध्नको लागी अन्तिम पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन तपाईले जीमेलमा याद राख्नु भएको छ। यदि तपाइँ तिनीहरूलाई कुनै याद गर्नुहुन्न भने, तल "अर्को तरिका प्रयास गर्नुहोस्" विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्।
यहाँ, तपाईंलाई सम्भावना दिइनेछ तपाईको मोबाइल फोनमा प्रमाणिकरण कोड पठाउनुहोस्। यस तरीकाबाट, हामीले जीमेलमा कोड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ खातामा फेरि पहुँच गर्नका लागि। यो सुरक्षित विकल्प हो, किनकि हामीसँग मात्र यो कोडमा पहुँच छ। त्यसोभए यदि कोही अरू प्रविष्टि गर्न कोशिस गर्दैछ भने, सन्देश हामीलाई प्राप्त हुन्छ। जिमेलले तपाईंलाई सन्देश वा कल प्राप्त गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ, ताकि तपाईले रूचाइएको विकल्प छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। सन्देश सजिलो छ।
जब तपाईं सन्देश प्राप्त गर्नुहुन्छ र कोड लेख्नुहुन्छ, तपाईं एक स्क्रिन प्राप्त गर्नुहुनेछ जसमा तपाईंले गर्नुपर्ने छ जीमेलका लागि नयाँ पासवर्ड सिर्जना गर्नुहोस्। फेरि, तपाईले यो पक्का गर्नु पर्छ कि यो एक मजबूत पासवर्ड हो। त्यसकारण, यो न्यूनतम characters अक्षरको हुनु आवश्यक छ। यसैले, जब तपाइँ यसलाई सिर्जना गर्नुहुन्छ र यसलाई पुन: टाइप गर्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको इ-मेल खातामा पहुँच पुन: प्राप्त गर्नुहुनेछ र एकै समयमा तपाइँको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहुनेछ।
कसरी बलियो पासवर्डहरू उत्पन्न गर्ने
कसरी कडा पासवर्डहरू बनाउने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो सबै प्रयोगकर्ताहरूलाई। तपाईको जीमेल खातामा यो प्रयोग गर्नका लागि मात्र होइन, तर अन्य धेरै खाताहरूमा पनि। पासवर्ड सिर्जना गर्दा, त्यहाँ थुप्रै दिशानिर्देशहरू छन् जुन सुरक्षा विज्ञहरूले प्रभावकारी हुन खातामा लिन सिफारिस गर्छन्। मुख्य पक्षहरू हुन्:
यो उपयुक्त छ कि यससँग न्यूनतम १२ वर्णहरू छन्
स्पष्ट परिमार्जनहरू नगर्नुहोस् जस्तै number नम्बरको लागि अक्षर E प्रतिस्थापन गर्नुहोस्
अपरकेस, लोअरकेस, संख्या र प्रतीकहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
प्रयोगकर्तासँग संबद्ध गर्न सजिलोको रूपमा केहि प्रयोग नगर्नुहोस् (जन्म मिति, उचित वा परिवारको नाम, घरपालुवा जनावरहरू, आदि)।
व्याकरणलाई लेख्दै छैन
त्यहाँ ध्यानमा राख्न धेरै पक्षहरू छन्, तर वास्तविकता यो छ कि त्यहाँ एक धेरै साधारण चाल छ कि एक मजबूत पासवर्ड उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, कि त Gmail वा अर्को प्लेटफर्मको लागि। तपाईंले एक शब्द लिनु पर्छ जुन तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, र हामीले केहि प्रतीक र संख्याहरू परिचय गर्नुपर्दछ उहीमा। यसले धेरै सरल हुनुका साथै सुरक्षामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दछ। जसले ह्याकि or वा चोरीको सम्भावनालाई कम गर्दछ।
उदाहरण को लागी, पासवर्ड धेरै प्रयोगकर्ताका लागि साझा पासवर्ड हो। तर यो एक कमजोर पासवर्ड हो, ट्रिकको साथ हामीले तपाईंलाई देखाइसक्यौं, हामी यसलाई धेरै सुरक्षित बनाउन सक्छौं, ताकि यो हुन्छ: $ P4s5W0rd% *। यसैले, यो धेरै लामो बिना नै, पासवर्ड धेरै जटिल र सुरक्षित छ। स्पेनको मामलामा, तपाईं जहिले पनि Ñ तपाईंको पासवर्डहरूमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, उनीहरूको सुरक्षा सुधार गर्नका लागि।
संसारमा सब भन्दा साधारण पासवर्ड मध्ये एक "१२123456" हो। धेरै सामान्य, तर कमजोर र Gmail मा प्रयोग गर्न खतरनाक। तर यदि हामी अघिल्लो सूत्र दोहोर्याउँछौं र केहि प्रतीकहरू र चिठी परिचय दिन्छौं things, चीजहरू धेरै परिवर्तन हुन्छन्। किनभने पासवर्ड हुन्छ: १% २ * ÑÑÑ $ .$। सबै समयमा धेरै सुरक्षित। यसैले, यी सरल चरणहरूको साथ, तपाईं पासवर्डहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको ईमेल खाता वा अन्य खाताहरूको लागि सुरक्षित हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी तपाईंको जीमेल पासवर्ड परिवर्तन गर्ने
मीठा सान्चेज भन्यो
यो सत्य हो
Dulce Sanchez लाई जवाफ दिनुहोस्
Xiaomi M365 स्कूटर समीक्षा
रोवेन्टा स्मार्ट फोर्स आवश्यक एक्वा, हामी यो रोबोट भ्याकुम क्लीनरको विश्लेषण गर्छौं जसले स्क्रब गर्दछ